SanDisk®RescuePRO®ပြင်းထန်သောကိုရီးယားဝေငှ | Data Recovery
နေအိမ် → SanDisk®RescuePRO®ပြင်းထန်သောကိုရီးယားဝေငှ
အဆိုပါ activation ဆော့ဖ်ဝဲအခမဲ့မိတ္တူကို download လုပ်ပါဖို့အောက်ကညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာစေရန်RescuePRO®:
1. SanDisk လွန်ကဲကဒ်များဖောက်သည်များကလက်ခံရရှိသောကူပွန်ကို Select လုပ်ပါ.
>>>>စကားရိပ်: နှစ်ခုRescuePRO®သို့မဟုတ်RescuePRO® Deluxe သကဲ့သို့, ကူပွန်ကို Select လုပ်ပါ.
**** သင်တစ်ဦးကူပွန်RescuePRO® SSD ကိုရှိပါက, ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ.2. သင်အသုံးပြုနေသော operating system ကိုပေါ် မူတည်. ကူပွန်ကို select ဖို့အောက်ကခလုတ်တစ်ဦးကိုရွေးချယ်ပါ.3. သင့်ရဲ့နံပါတ်စဉ်ကို အသုံးပြု. activation code ကိုရရှိရန်မည်ကဲ့သို့အကြောင်း RPRID
Windows XP를 사용하는 경우 ,RescuePRO® Standard 의 XP 호환을 위해서 ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ 또는 RescuePRO® Deluxe의 XP 호환을 위해서 ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ